Imidlalo yekhompyutha namuhla iyindlela ethandwayo kakhulu yokuzijabulisa - inikeza izihloko ezijabulisayo, ukusebenzisana, ikhono lokubonisa amakhono angokwenyama nangokwengqondo nokuningi okuningi. Kodwa-ke, akusikho ngaso sonke isikhathi isikhathi sokuqala umdlalo ogcwele, ungene ngokujulile kuwo, ucabange ngale ndlela. Ngezikhathi ezinjalo, kunemidlalo encane yeselula engakujabulisa futhi ikujabulise, ngenkathi ilayishwa ngokushesha futhi cishe ayidingi ukuba uchithe isikhathi. Ungaqala ukudlala nganoma isiphi isikhathi, nganoma yisiphi isikhathi, yeka, londoloza noma ubeke umdlalo uma uhamba kancane ngaphandle kwemiphumela. Esinye sezibonelo eziqhakazile zemidlalo yeselula, ezitholakala kuma-smartphone namaphilisi, ngisho nakuma-laptops namakhompiyutha abo, i-Cut the Rope. Ukuhamba kwalesi mdlalo kudinga ukuthi kokubili ukucabanga okunengqondo nokulala kwesandla.
Yini i-Cut the Rope?
Abasebenzisi abaningi abangazange badlale le phrojekthi ye-arcade bayofuna ngokushesha ukuthi yini i-Cut the Rope. Ukuhamba kwalolu mdlalo kunenombolo enkulu yamazinga amancane-okukodwa okukrini. Umgomo wakho ukondla i-monster Om-Nom nge-candy. Futhi ungakwenza kanjani lokhu? Lapha konke kunzima nakakhulu, ngoba ku-Cut the Rope le ndima ihluke kakhulu.
Ukudlula amazinga Sika iRope
Le phrojekthi iye yathandwa kakhulu kangangokuba abathuthukisi abakhathele ngokudala izingxenye ezintsha nezengezo kubo. Ngokwemvelo, kuzo zonke izinguqulo ze-Cut the Rope, le ndima, noma kunalokho, isimiso sayo, ihlala ingashintshi.
Esikrinini sezinga yi-monster Om-Nom, ofuna kakhulu ukuthola i-candy emiswe ngentambo. Futhi udinga ukusika le ndoda ukuze i-lollipop ithole ngqo emlonyeni wakho ku-Om-Nom. Esikhathini sokuqala, isibonelo, udinga ukufaka isilayidi umunwe wakho kusikrini sokuthinta se-smartphone noma ithebhulethi lapho intambo ikhona khona ukuyivala. Noma kunjalo, amazinga angeziwe azoba nzima nakakhulu - kuzodingeka uhlanganyele ngezinto ezahlukene, ucabange ngokulandelana kokusika izintambo nemiphumela okuzoholela kuyo. Ngokuvamile, abathuthukisi banemicabango eyanele ukuqinisekisa ukuthi izinga ngalinye liyathandeka futhi liyingqayizivele. Okungavamile nakakhulu, kubonakala sengathi kukhona kakade izinguqulo ezine zalo mdlalo, futhi kuzo zonke zazo zikhona izahluko ezigcwele amazinga angu-25 ngamunye. Isibonelo, kunguqulo yangempela yomdlalo, isahluko ngasinye ibhokisi lezinhlobo ezahlukene zokwakha lapho isenzo senzeke khona. Futhi kunamabhokisi angu-16 ephelele, okungukuthi, ngamazinga angu-400 - amazinga. Okumangalisayo, akunjalo? In Cut the Rope-2 inkulumo futhi ayibonakali emfushane, nakuba kunamazinga ambalwa kakhulu - kuphela 150.
Njengengxenye yokuqala, naku-Cut ama-Rope-2 adlula amazinga - lokhu akuwona umsebenzi wakho kuphela. Isibonelo, ungakwazi futhi ukuqoqa impumelelo. Abanye babo uzothola noma kunjalo - isibonelo, ukuqoqa izinkanyezi ezingamashumi amahlanu emazingeni. Izinga ngalinye ungahamba ngezikhathi ezahlukene, futhi uma uhlala ngaphakathi, uzobe unikezwa izinkanyezi ezintathu, uma kungenjalo - ngokwemvelo, ngaphansi.
Ngakho-ke, uma udlula amazinga angamashumi amahlanu ngesiphumo esibi kunazo zonke, uzobe uthola le mpumelelo. Kodwa kukhona abanye abazosebenza kanzima. Isibonelo, ungakwazi ukuphoqa u-Om-Nom ukuba avule umlomo wakhe ize, okungukuthi, ukwenza ukuba i-candy ibe khona eceleni kwakhe, kodwa akazange afike kuso. Yenza lokhu izikhathi eziyishumi - futhi uthole impumelelo. Ngokuvamile, uzothola okuthile okumele usebenze - izimpumelelo ziyanciphisa ngokuphelele ukuhamba komdlalo Sika i-Rope.
Uma ku-Game Cut the Rope ukuhamba kwamazinga kufinyelela endaweni ethile, uthola ukufinyelela kumdlalo omncane, ongase uthathe ikhefu ukuze uphumule ekusikeni njalo kwezintambo. Kulo mdlalo omncane ungakwazi ukugcina u-Om-Nom, okuzozingela ama-candies. Ngokwemvelo, uzozama ukuvimbela izinsipho, kanye nezinye izithiyo, ngakho-ke uzodinga ukuzitholela. Ngomdlalo omncane, izinkanyezi nazo zanikezwa kuye ngokuthi uzothola kanjani umphumela omuhle.
Umdlalo ubuye ube nesici esisodwa esenza ukuthi sihluke kakhulu futhi sijabulise. Unesibuko esihlukile ngegalari yezithombe. Ngeshwa, ekuqaleni komdlalo bonke bayi-grey, okungukuthi, azikho izithombe kuzo. Umsebenzi wakho ukuwathola, ukuze igalari yakho ibe nemibala futhi ibe nemibala, futhi ungayithanda imisebenzi yobuciko ne-monster oyi-Om-Nom oyikhonzile. Ngokushesha kufanelekile ukusho ukuthi cishe zonke izithombe zifihliwe emazingeni ahlukene womdlalo, futhi udinga ukuzithola enqubo ukuze zengezwe kugalari yakho. Futhi kuphela inombolo yesithombe esisodwa, esichaza u-Om-Nom ku-bubble endizayo ngemuva kwe-candy, kuzodingeka uyenze ngokuhlukile. Ukuze lesi sithombe sibonakale kugalari yakho, kuzodingeka ubeke lo mdlalo ku-Facebook. Lo msebenzi ulula kakhulu, kodwa akucaci, abadlali abaningi banenkinga nge-image.
Ukubuyekeza, analogs nokulaywa "Kombigrippa"